စိတ်ရောဂါထိန်းချုပ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားသိထားတဲ့အရာတွေ - Hello Sayarwon
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇူလိုင် 31, 2020 .2mins read
Antidepressant လို့ ခေါ်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်သူတွေရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုချိန်ထိကို သောက်ရမှာ ကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိနေသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။
စိတ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လာလို့ စိတ်ဆရာဝန်နဲ့ ပြတဲ့အခါ စိတ်ကုထုံး (Therapy) နဲ့ ဆေးဝါးကုထုံး (Medication) ကို လူနာရဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲပေးရတာ ရှိနိုင်သလို တွဲပြီးပေးရတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ဆေးသောက်ရမယ့် လူနာက ကိုယ်သောက်ရမယ့် ဆေးကို ကြောက်နေရင်၊ ဒီဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ စိတ်တွေလွန်ကဲနေရင် ရောဂါပျောက်ဖို့အရေး ပိုဆိုးအောင် လုပ်သလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ စိတ်ရောဂါ သောက်ဆေး (Antidepressant) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေ မှားယွင်းစွာသိထားကြတဲ့ အချက်တွေကို ပြန်လည် ဖြေရှင်းပေးချင်ပါတယ်။
၁။ Antidepressant ဆိုတာ စိတ်ကျရောဂါ တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ပါ။
စိတ်ကျရောဂါအတွက်သာမက တခြားသော စိတ်ရောဂါတွေ ဖြစ်တဲ့ စိတ်အတက်အကျ မြန်ခြင်း၊ စွဲလမ်းစိတ် လွန်ကဲခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်လွန်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု စတာတွေမှာပါ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဆေးရဲ့ အာနိသင်ကို ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင် ငြိမ်စေဖို့ ထိန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ရဲ့ ဆေးအညွှန်းမပါဘဲနဲ့ ကိုယ့်သဘောအတိုင်း သောက်လို့တော့ မရပါဘူး။
၂။ Antidepressant တွေ သောက်လို့ သင့်ရဲ့ နဂိုပုံစံ ပျောက်သွားတော့မှာလား။
တချို့တွေးပူကြတာက ဒီလို စိတ်ရောဂါသောက်ဆေးတွေဟာ အတွေးအခေါ်နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိန်းချုပ်ပေးတာ ဖြစ်လို့ ဆေးများများသောက်လေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ နဂိုမူရင်းပုံစံ၊ စိတ်အခြေအနေ၊ ဖြစ်တည်မှုဟာ တခြားတစ်ယောက်အသွင် ပြောင်းလဲသွားမလားဆိုတာပါ။ တကယ်တော့ ဒါက လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်းခြင်း၊ မကောင်းခြင်း ဆိုတဲ့အရာတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေမှာမှ မကောင်းတဲ့အရာတွေကို ဆက်မတွေးမိစေဖို့ ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးထားရုံ သက်သက်ပါ။
၃။ ဒီဆေးမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ နဂိုစိတ်ရောဂါတွေ ပြန်ဝင်လာတော့မှာလား။
ရောဂါလက္ခဏာကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ဆေးဆိုတာ မှန်ပေမယ့် စိတ်ရောဂါ သက်သာလာလို့ ဆေးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း အရင်တုန်းကလို ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိတ်အခြေအနေကို ပြန်ရောက်သွားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၄။ ဆေးအပေါ် စွဲလမ်းသွားနိုင်လား။
စိတ်ရောဂါသောက်ဆေးကို လူအများစုက အိပ်ဆေးနဲ့ မှားတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ညစ်လို့ အိပ်မပျော်တာကို အိပ်ဆေးသောက်အိပ်တဲ့အခါ လူတွေက နဂိုရှိနေတဲ့ စိတ်ရောဂါအခံနဲ့ ဆေးမပါရင် အိပ်မပျော်တော့တာပါ။ စိတ်ရောဂါသောက်ဆေးသည် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ တွေးနေတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ထိန်းချုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးဖြစ်လို့ ဒီဆေးသောက်ပြီး ရောဂါပျောက်သွားရင်လည်း စွဲလမ်းတဲ့စိတ် ကျန်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၅။ စိတ်ရောဂါသောက်ဆေးရဲ့ အာနိသင်ကို စစချင်း သောက်ကာစမှာ ခံစားရဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Antidepressant ရဲ့ အာနိသင်ကို အမှန်တကယ် ခံစားရပြီး စတင်သက်သာလာဖို့ ကြားထဲမှာ အချိန် ၄ ပတ်ကနေ ၆ ပတ်ထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ လူအများစုက တစ်ပတ်လောက် ဆေးသောက်ပြီး မသက်သာဘူးလို့ ကောက်ချက်ချကာ ဆေးဆက်မသောက်ဘဲ ရပ်ပစ်လိုက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်း စိတ်ဆရာဝန်အများစုက စိတ်ကုထုံးနဲ့ ဆေးဝါးအကူအညီ ၂ မျိုးလုံးကို ယူနိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်လို့ အကြံပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ စိတ်ရောဂါ သောက်ဆေး တံဆိပ်တိုင်းက သင့်အတွက် ကိုက်ညီချင်မှ ကိုက်ညီမှာပါ။
ရိုးရိုး ရောဂါပျောက်အောင် ဆရာဝန်က ဆေးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာ၊ အာနိသင်မကောင်းတာ၊ တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်တတ်သလိုပါပဲ၊ စိတ်ရောဂါ သောက်ဆေးမှာလည်း ဒီတံဆိပ်ကောင်းတယ်ဆိုတိုင်း ကိုယ့်အတွက် ကောင်းချင်မှ ကောင်းနိုင်မှာပါ။ ဆေးကို ပုံမှန်လေးသောက်ပေးပြီး အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှ လူနာရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ဒီဆေး လူနာနဲ့ တည့်သည်၊ မတည့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာပါ။
၇။ စိတ်ရောဂါသောက်ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ထိန်းချုပ်မရအောင် ဆိုးရွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဆေးတိုင်းမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်နိုင်ခြေက အနည်းနဲ့ အများရှိသလို စိတ်ရောဂါ သောက်ဆေးမှာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာတာ၊ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တာမျိုးတွေ၊ လိင်တံ မထောင်မတ်နိုင်တာ၊ လိင်စိတ်နည်းသွားတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် အရမ်းစိုးရိမ်ရလောက်အောင် ပြင်းထန်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးအမျိုးအစား ပြောင်းပေးတာ၊ သောက်ရန် ပမာဏ လျှော့ပေးတာ၊ လက္ခဏာကို သက်သာစေမယ့် ဆေးတွေ ပေးတာမျိုး လုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
၈။ တစ်သက်လုံး စွဲသောက်သွားရမယ့် ဆေးမဟုတ်ပါဘူး။
Antidepressant တွေဟာ ရေတိုအတွက် စိတ်ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီး တစ်သက်လုံး စွဲပြီး သောက်သွားဖို့တော့ မလိုပါဘူး။ ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဆေးအကူအညီမလိုဘဲနဲ့ စိတ်ကုထုံးနဲ့သာ ကိုယ့်စိတ်ကို ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဖြစ်နေအောင် ထိန်းထားလို့၊ ပုံသွင်းပေးလို့ ရပါတယ်။
စိတ်ဆိုတာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကို ရှေ့ဆက်တိုးစေဖို့ ပဲ့ကိုင်ပေးနေတဲ့ အထိန်းဖြစ်တာကြောင့် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့မနေဘဲ တစ်ခုခု ပြဿနာရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြသကြည့်စေချင်ပါတယ်နော်။
https://www.healthline.com/health/antidepressant-side-effects (July 30, 2020)
နားအူတာ သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
နားအူတာ က နားထဲမှာ တစီစီနဲ့ တော်တော်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အရာပါ။ လတ်တလောမှာ ဆေးခန်းမသွားနိုင်သေးရင် ဒီနည်းလမ်းတွေကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း, နားပြဿနာများ စက်တင်ဘာ 1, 2021 .3mins read
ဘေဘီလေးတွေကို ပုံပြင် ပြောပြပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတာကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဩဂုတ် 31, 2021 .2mins read
အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါ ရာသီထိမ် သွားတယ်ဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေ ပြန်ကြားရပါတယ်။ ကိုဗစ်က ရာသီကို ထိမ်စေနိုင်သလား။
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဩဂုတ် 20, 2021 .2mins read